Mmekọ Companies - Ningbo Nide Mechanical Co., Ltd
Armature mmepụta akara
Armature mkpuchi akwụkwọ inserting igwe
Nkpirikpi inserting igwe
Armature asọfe igwe
Okporo ịpị igwe
End cover ịpị igwe
Commutator ịpị igwe
Commutator ntụpọ ịgbado ọkụ igwe
Armature guzozie igwe
Armature impregnation varnishing igwe
Armature uzuzu mkpuchi igwe
Armature testing igwe
Aluminum anwụ mgbatị igwe
Stator mmepụta igwe
Stator mkpuchi akwụkwọ inserting igwe
Agịga asọfe igwe
Stator asọfe igwe
Stator asọfe inserting igwe
Nga froming igwe
Final akpụ igwe
Stator uzuzu mkpuchi igwe
Stator impregnation varnishing igwe
Nide eso mmekọ ụlọ ọrụ
Emi odude ke Hi-Tech District na Ningbo obodo, ulo oru ehiwe nke China, na-ewere uru nke ike oru na azụmahịa otu, Ningbo Nide Mechanical ngwá Co., Ltd na-elekwasị anya R & D, ahịa & ahịa, àgwà akara na mgbe ọrụ nke ígwè ọrụ nke na-emepụta site na ya mmekọ ụlọ mmepụta ihe na (Jiangsu Nide akpaaka Tech Co., Ltd na Jiangsu Xiandian Mechanical Co., Ltd.
E wezụga igwe ụlọ ke ụlọ, na-achịkwa ya àgwà na ọrụ usoro, Nide n'ibu-enyekwa ụfọdụ inyeaka igwe outsourced site na ụfọdụ ndị ọzọ ndị ọkachamara na-emepụta maka ya ahịa. Nzube ya bụ iji belata ahịa mmezi ọrụ na free si na-echegbu nke àgwà nke.
Nide nwere itieutom ke India, Brazil, Korea, Turkey, na Argentina, mma ahịa na ọrụ net ọrụ ekwe ka anyị nweta na-enye ọrụ ndị ahịa nke ụwa mfe na ngwa ngwa. Pụrụ ịdabere, ibu ọrụ na ngwa ngwa mmeghachi omume enyemaka Nide iji merie n'ụwa niile ahịa 'obi ike seccesively, otú anya Nide enyewo ngwaahịa na ya ahịa karịa mba 40 dị ka Germany, Italy, Spain, France, Turkey, India, Brazil, Vietnam, Mexico, Agentina, USA, ect, ọtụtụ ahịa bụ ndị na-eduga onye ya na ubi ya.
Anyị chọrọ na-eweta ahịa anyị na kachasị full mkpọ ngwọta moto n'ichepụta.
2.Jiangsu Nide akpaaka Tech Co., Ltd
Dị na Suzhou, ekpuchi ogbako ebe 9,000 square mita, na 102 ọrụ, Jiansu Nide akpaaka-Tech Co., Ltd tumadi Nlụpụta guzo tinyere igwe na-n'ụzọ zuru ezu akpaka akara maka itinye n'ọkwa moto stator, BLDC moto asọfe igwe, mpụga rotor mmepụta igwe, rotor nzukọ akara, moto nzukọ akara na ndị ọzọ na ahaziri igwe ma ọ bụ mmepụta akara.
The ngwaahịa na-tumadi etinyere maka otu na atọ na-adọ itinye n'ọkwa moto, mmiri mgbapụta moto, ịsa igwe moto, ikuku ọnọdụ moto, ofufe moto, mpikota moto, electric ígwè moto, BLDC moto, servo moto, electric akpakanamde moto, wdg ụfọdụ anyị ngwaahịa na-OA mma.
Nditịm mejuputa atumatu ISO 9001system, onwem na elu kpọmkwem machining owuwu, anyị hụ anyị ngwaahịa izute ihe ahịa 'kpọmkwem mkpa.
3.Zhejiang Nide Intelligent akpaaka Co., Ltd
Zhejiang Nide Intelligent akpaaka Co., Ltd, nke a na-nsuresi-ekesịpde Ningbo Nide Mechanical Equipment Co., Ltd, nọ ọdụ ulo oru ehiwe obodo Ningbo, tumadi-elekwasị anya na ihe ọhụrụ asọfe na nzukọ technology nile di iche iche nke BLDC moto, gụnyere nkume tinyere igwe na-n'ụzọ zuru ezu akpaka zuru akara. Ka ọ dịgodị, anyị na-hazie ụfọdụ na-abụghị ọkọlọtọ igwe njinji maka ahịa mkpa moto n'ichepụta ubi.
Jighi àgwà akara usoro, plus ike oru otu ekwe ka anyị na-enye pụrụ ịdabere na ígwè ọrụ ahịa anyị. Nkà ihe ọmụma nke "Service, ọrụ, ozugbo, ji ezi obi" na-enyere anyị aka imeri ihe ndị ahịa amara.
Nide-Dị nnọọ ka mfe, bụ na-agbalị ka ọ bụghị nanị na-eme ka moto n'ichepụta mfe, ahịa mfe, ma na-egbu maka ndụ n'ọdịnihu mfe!
Dị na Hengshan Qiao sinik ntụpọ, Changzhou, Jiangsu anāchi achi, na uwe mpaghara 15000 square mita, Jiangsu Xiandian Mechanical Co., Ltd na-pụrụ iche na Micro-moto (usoro igwe, DC igwe) armature mmepụta igwe n'ichepụta. Anyị na-emepụta na nso nke armature mmepụta guzo tinyere igwe na n'ụzọ zuru ezu akpaka armature nzukọ akara, dị ka aro na ịpị igwe, mkpuchi akwụkwọ inserting igwe, armature asọfe igwe, nkpirikpi inserting igwe, commutator fusing igwe, commutator mbịne igwe, armature guzozie igwe, armature ule panel, stator asọfe igwe, wdg
The ngwaahịa tumadi emetụta ezinụlọ ngwa, ụgbọala, ike ngwá ọrụ, wdg Na armature n'ichepụta igwe ubi, anyị na ụlọ ọrụ bụ otu nke na-eduga na-emepụta na China, na successively ọdịda "Hi-Tech Enterprise" site ọchịchị.
Anyị na-akpụ akpụ n'ihu ...
Nọ ọdụ mara mma oké osimiri obodo-Ningbo, na-ewere uru nke elu ọrụ ehiwe, zuru okè ọkọnọ yinye na-adaba adaba ụgbọ njem, na tụnyere ọrụ otu na ọgaranya moto n'ichepụta ahụmahụ, Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd na-elekwasị anya kpọbata ndị dị iche iche ụdị moto mmiri ahịa anyị.
The ngwaahịa na-agụnye commutator, bọl amị, aro, carbon ahịhịa, mkpuchi akwụkwọ, thermal n'echebe, magnet, ofufe, moto cover na lamination. E wezụga ndị a na ngwaahịa, anyị na-enye ọrụ maka moto n'ichepụta technical ndụmọdụ, oru ngo nkwado na-atụgharị-isi oru ngo.
Na iri afọ ahụmahụ na moto n'ichepụta ubi, anyị nke ukwuu ịghọta ihe ndị ahịa kpọmkwem ina, a ịrịba moto mmiri n'ichepụta net ọrụ na iwu siri ike àgwà akara usoro-ekwe ka anyị na-enye anyị ahịa ezi mma ngwaahịa na ihe ezi uche price, ihe mgbaru ọsọ anyị bụ inyere ahịa iji belata na-agwụ ike sourcing erughị ala mgbe enweta ezi àgwà ngwaahịa.
Nide chọrọ bụ inye ụwa n'obosara ahịa na onye-nkwụsị ọrụ maka moto n'ichepụta. Mee moto, na-atụgharị Nide, ihe niile ga-adị mfe!